Complaint / Claim » လေဆိပ်မှာ	20
ငင့်..! နာ့ အိတ် ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်?? ပြန်ဖြတ်ပေးးလိုက်ပါတယ်.. “ရတနာတွေ ဒီလောက် အများကြီး ဘာလို့ သယ်လာလဲ”
ကိုယ်လည်းး မဟုတ်တာမလုပ်ပဲ မျက်နှာချိုလည်းးမသွေးချင်ဘူးးး အရစ်လည်းး မခံနိုင်ဘူးးး ခြိမ်းသလို ခြောက်သလိုလည်းးး လာမလုပ်နဲ့ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ များး စော်ကားးမိသလားးလို့ ဒွိဟ ပြန်ဖြစ်နေမိတယ်… About ဇီဇီ
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: သြ
ခင်ဇော် says: ??
kai says: ယူအက်စ်ကတော့.. ၁သောင်းကျော်ရင်.. ကြေငြာရတယ်..။
ကြေငြာရင်.. စစ်လားဆေးလားဖြစ်ပြီး.. အခန်းထဲသွင်း… ဒုက္ခရောက်ရောပဲ..။ Travel to or from the United States
ခင်ဇော် says: ဒါရှို တညားး လာလည်ရင် ၉၉၉၉ ပဲ သယ်လာခဲ့မယ်ညော်..!!!
kai says: ပလတ်စတစ်ကဒ်တွေယူလာပေါ့..။
လည်လည်လာရင်ကြိုပြောနော..။ ရိုဆမ်မတီတောလိုက်ပို့ပြီး.. တောထဲမှာထားခဲ့ဖို့.. စီစဉ်မလို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: တာဇံ ပါ စီစဉ်ပေးပါ..
Was this answer helpful?LikeDislike 4113
ခင်ဇော် says: ဘယ် ခရက်ဒစ်ကတ် သုံးသုံး အိုကေတဲ့နိုင်ငံတွေ ကန့်သတ်တာတော့ တော်သေးးး
Ma Ma says: ခေတ်အပြောင်းကို စောင့်နေတာ။
ခင်ဇော် says: အပြောင်းးအလဲ ကြားးမှာ
ဦးကြောင်ကြီး says: လှေဆိတ်ဝံထမ်းဘွကိုလှဲ ဆာနှာအူး ဝှီဂါပန်းသေးလူမိုက် အလျှာတိုလာခင်ဇော်ရဲ့
ခင်ဇော် says: ဒေါ်လှ နေ့စဉ် ဝင်နေတဲ့ လူတွေကို နာ က သနားးရမလားးးး
hmee says: အမတော့ ပြင်သစ် လေဆိပ်မှာ အရစ် ခံရတာများ စိတ်တိုချက်။ လည်ပင်းမှာ ဆွဲလာတဲ့ ဆွဲကြိုး ချွတ်ပြီး ဘမ်းထဲ ထည့်ခိုင်းတယ်။ ဆွဲသီးလေး စိတ်မချလို့ သောကတွေကို ပွေလို့။
ခင်ဇော် says: လုံခြုံရေး အရ စစ်တာမျိုးကို ကျနော် မပြောပါဘူး မွမှီရယ်။
Thint Aye Yeik says: .လေဆိပ်က ဝန်ထမ်းတွေတော့….အခုတလော ရစ်တာ၊ ဟောက်တာ အတော် နာမည်ကြီးနေပြီ…
အခု ဖြစ်နေတာက ပလိန်းကြီးတွေ … အဖြူ ထည်ကြီးတွေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ငိငိ
.လူမိုက်ပီပီ ပြန်ကိုက်..အဲအဲ..ပြန်ဖိုက်ပစ်တယ်ပေါ့…လေးစားပါတယ်ခင်ဇော်ရယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ဒီထက်ရစ်ရင် တကယ် ကိုက်ရတော့မှာ
Crystalline says: အစ်မတော်တွေက..ရွေကြိုက်တော့ ဆွဲကြိုး၃..၄ကုံးဆွဲပြီး… လည်ပင်းပိတ်အင်းကျီဝတ်သွားလိုက်တာပဲ…လက်တွေလည်းဝတ်ပေါ့…ဝတ်မရတာတော့ ကာဗွန်နဲ့ထုတ်…စကွိစကွ..ကလစ်ဖန်စီဘာညာနဲ့ရောထည့်သွားတာပဲ..တစ်ခါမှအစစ်မခံရဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ကို ခိုးသယ်နေရတာမဟုတ်သေးပါဘူးအေ။